Muxuu Pirlo ka yiri kulanka ay Inter Milan ku wada ciyaari doonaan semi-finalka Coppa Italia?? – Gool FM
(Turin) 01 Feb 2021. Tababaraha kooxda Juventus ee Andrea Pirlo ayaa ka hadlay kulanka ay Inter Milan ku wada ciyaari doonaan semi-finalka koobka Coppa Italia.
Garoonka San Siro ee magaalada Milano ayaa marti galin doona lugta hore habeen dambe oo Talaado ah, halka labada koox ay mar kale ku kulmi doonaan lugta labaad Talaadado 9-ka Febraayo, iyadoo lagu ciyaari doono garoonka Allianz ee magaalada Turin.
War sidaha “Football Italia” ee dalka Talyaaniga ayaa soo xigtay wareysi uu bixiyay Andrea Pirlo, kahor kulanka habeen dambe, wuxuuna yiri:
“Si fiican ayaan u garaneynaa tababaraha Inter, waxaana diyaar u nahay waxa dhici kara.”
“Si aad u fiican ayay u difaactamayaan, waxayna qatar ku yihiin weerarada rogaal celiska ah iyo ka soo bilaabida meelaha banaan, waa inaan taxadarnaa.”
“Waxaan doonayaa inaan arko koox ka warqabta meelaha ay ka xooganyihiin, waxaan ciyaareynaa lugta hore mana ahan kulan wax lagu go’aamin karo, waa inaan wanaajinaa wax qabadkeena.”
“Waxaan sameyn doonaa isbadal. Buffon wuu ku soo bilaaban doonaa, Aaron Ramsey isagana ma ciyaari doono sababa la xiriira dhaawac ka soo gaaray dhanka muraqa awgiis, laakiin waxaan rajeyneynaa in heli doono kulanka Sabtida.”
“Kooxdaas ciyaartoyda ah wali waxay leeyihiin hammi ah inay guuleystaan.”